भ्यागुताको धार्नी र अमेरिकामा नेपाली पत्रकार :: Press Chautari ::
न्युयोर्कले हिउको सिरक फाल्दै थियो, सन् २०१४ मार्च लाग्दै गर्दा, पत्रकार मित्र किशोर पन्थीले प्रस्ताव गरे, नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ नेजाको सदस्यता लिन । “नयाँ र पुराना पत्रकार बीचमा भेटघाट गर्ने, अनुभव साटासाट गर्ने र परेको बेला एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने थलो हो नेजा, तपाई पनि सदस्य बन्दा हुन्छ ।”
म सदस्य बने तर टेक्सासमा भएको नेजा अधिवेशन सके पछि पन्थी सहितको जम्बो टोली अब हामी नेजामा छैनौ भन्दै फर्किए, “गैर पत्रकार सदस्य भएको र तत्कालिन उपाध्यक्ष गौतम दाहालले लेटरप्याट दुरुपयोग गरेको” आरोप सहित ।
न्युयोर्कमा नेजा र गैर नेजा गरि दुइ कित्ताका पत्रकार । घडीको सुइ रोकिदैन, नेजाको अर्को अधिवेशन आयो । भोला आचार्यले सहयोग मागे अध्यक्ष बन्न ।
लस एन्जलस (एलए)को लागि टिकट काट्दै गर्दा रंगिन दुनियाँका लागि प्रख्यात शहरमा धेरै पत्रकार एकै ठाँउमा भेटघाट हुने दृश्यले उत्साहित थिए । अघिवेसनको व्यवस्थापन भब्य तर भित्र भित्र खिचडी पाक्दै । मेरो उमेर भन्दा पनि धेरै पत्रकारितामा जीवन विताएका दुई पत्रकार दाजुहरु योगेश उपाध्यय र तारा बराल, संथापक अध्यक्ष गिरिश पोखरेल उपस्थित बन्दसत्रमा मञ्चबाट एका एक विधान संसोधनको कुरा आयो । सल्लाहाकारलाई पनि कार्यसमिति मानिने गरि ।
नेजा विधानले अध्यक्ष बन्न एक कार्यकाल कार्यसमिति रहेको हुनु पर्ने बाध्य पारेको छ । सोझै भन्नु पर्दा तारा बराललाई अध्यक्ष बन्ने बाटो फुकाउन विधान नै संसोधन गरिदै थियो ।
विधान संसोधनको प्रक्रिया र नियतमा मैले प्रश्न उठाएको हो । कसैलाइ रोक्न र कसैलाई छेक्ने स्वार्थले राता रात विधान संसोधन गर्दा सस्था सस्था रहदैन भन्ने मेरो मान्यता थियो ।
दिपक तिवारी मेरै छेउमा थिए, उनी पनि आफ्ना भनाइ राख्न खोज्दै थिए । बन्द शत्रको अध्यक्षता गर्दै गरेका संस्थापक अध्यक्षले दिपकलाई सुनेनन वा सुनेर पनि वास्ता गरेनन । म पनि बोल्छु भन्दै दिपक अगाडी गएका थिए, सोही घटनालाई अहिले सम्म सस्थापकको माइक खोशियो, “हुलहुज्यत” गरियो भनेर स्याल हुइया गरिएको छ ।
हलले विधान संसोधनको प्रस्ताव अस्वीकार गर्यो, पुरानै विधान अनुसार निर्वाचन भयो । भोला आचार्यको अध्यक्षतामा पुरै टिम निर्विारोध भयो । एउटा समुह भोलाको मुख हेर्नु छैन भन्दै हिड्यो । टेक्सास क्षेत्र बाहुल्यता रहेको त्यो समुह दुइ बर्षे कार्यकालमा दैलोमा नै भएका नेजाका कार्यक्रममा अनुपस्थित मात्र होइन, नेजाको समाचार नै ब्लाक आउट गरे । यद्यपी उनहरु आफुलाई “व्यावसायीक पत्रकार” भन्ने गर्दछन् ।
म नेजा बाहिर रहेका साथीहरु सँग छलफलमा जुटेको थिए । प्रशान एलुंग राई, विजय पौडेल, शैलेश श्रेष्ठ लगायत सँग सकारात्मक कुरा हुदै थियो । कार्यसमितिमा प्रस्ताव लगे, तर उपाध्यक्ष गुणराजलाई नेजा बाहिर रहेका साथीहरु सँग बार्ता गरि समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिइयो । दुइ बर्षे कार्यकालमा गुणराजले के गति काम गरे त्यो इतिहासले नै बताउला ।
हिसाव र पिसाव सफा हुनु पर्दछ
कुनै पनि व्यक्ति वा विषयमा गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध रहने गर्दछ । हामीले नै बनाएको अध्यक्ष भोला आर्चाय विधि भन्दा बाहिर हिडे । कार्यसमितिका अधिकांस बैठक अध्यक्षले गरेका आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रित भए ।
अध्यक्ष आचार्यले हवाइ टिकट, होटल बुकिङ्गमा नेजाको क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेको, कार्यक्षत्र नाघेर बैक खाताबाट पैसा झिकेको रिपोट कोषाध्यक्ष मार्फत आयो । पाँच सय डलर भन्दा बढी रकमको कारोवार गर्न कार्यसमितिको निर्णय अनिवार्य छ । तर अध्यक्षले आफु खुसी १५ सय डलर सम्म रकम झिकेको देखियो । कोषाध्यक्ष शैलेश पोखरेलले यो कुरा कार्यसमितिमा जानकारी गराए पछि अध्यक्ष भोलाले अनलाइन बैकिङ्गको पासवर्डनै परिवर्तन गरिदिए । पछि त्यसो नगर्न कार्यसमिति बैठकले चेतावानी नै दिनु प¥यो ।
कार्यसमितिको निर्णय विना घोषण गरिएकको टेक्सास नेजा नाइटमा अध्यक्षको “कोट” राखेर बनाइएको समाचारमा आठ हजार अमेरिकी डलर आम्दानी भएको भनियो ।
आठ महिना पछि, १४९० आम्दानी भएको र १४८८ खर्च भएको भन्दै दुइ लाइनमा हिसाव बुझाइयो ।
उपाध्यक्ष एबं भर्जिनिया साधरण सभाका संयोजक गुणराजले पटक पटकको आग्रहमा आठ महिना पछि अधुरो हिसाव दिए, केही आम्दानीको स्रोत नै छुटाएर ।
साधरण सभामा उपस्थित भएर दर्ता शुल्क तिरेका कतिपय व्यक्तिको नाम नै त्यसमा समावेस थिएन । त्यस्तै कार्यक्रममा लञ्च र डिनर स्थानीय व्यक्ति र संघ सस्थाले प्रायोजन गरेको भनिएको थियो तर खाना शिर्षकमा आठ सय डलरको बील देखियो । कार्यसमितिले त्यो के भएको हो भनेर सोध्ने निर्णय गर्नु र गुणराजको राजीनामा संयोगले एउटै समयमा पर्न गयो ।
एक हजार सात सय ४८ डलर सबै भन्दा ठूलो विवाद बन्यो । भोला आचार्य महासचिव नै हुदा न्युयोर्कमा भएको नेजा नाइटमा त्यो रकम बचत भएको भन्दै प्रतिवेदन बुझाइएको रहेछ । बचत रकम बारेमा कोषाध्यक्षले चासो राख्न थाले पछि, व्यक्तिगत इगोमा घटना क्रम मोडियो । कार्यसमितिको अन्तिम बैठकमा नुर गिराएर माफि माग्दै त्यो १७ सय ४८ डलर तिर्नै पर्ने रहेछ, त्यति बुद्धि एक बर्ष अगाडी मात्र आइदिएको भए ?
सियाटल अधिवेशन र डिलमा बस्नेहरु
नेजा अधिवेशन आयोजनाका लागि चार स्थानमा प्रस्ताव आए । सल्लाहाकार योगेश उपाध्ययको “अन्तिम इच्छा” भन्दै गुणराजले मेरिल्याण्डको प्रस्ताव ल्याए । क्षेत्रीय संयोजकहरु किशन रेग्मीले टेक्सास, ध्रुब कुँवरले क्यालिफोर्निया र यम घिमिरेले सियाटल प्रस्ताव गरे ।
हरेक अधिवेशन नयाँ नयाँ स्थानमा गर्दै नेजालाई अमेरिकामा नेपाली बस्ने सबै शहर सम्म पु¥याउने भन्ने मर्म रहेछ । अर्को तर्फ एक बर्ष अगाडी भर्जेनियामा सम्पन्न अधिवेशनको आयोजना पक्ष र आर्थिक पक्ष नै स्पष्ट नभएको अवस्थामा फेरि त्यही स्थानमा अर्को अधिवेशन तोक्नु भनेको आत्मधाती गोल गर्नु सरह थियो । डिलमा बसेको भन्ने एउटा समुहले टेक्सासमा हुने नेजाका हरेक कार्यक्रम भाजो हाल्ने गरेको थियो ।
“योगेश उपाध्ययको प्रस्ताव भन्दा अन्यमा छलफल हुने बैठममा मेरो उपस्थिती नै रहने छैन ।” बैठक बस्नु केही समय अगाडी गुणराजले समुह च्याटमा म्यासेज पठाए । अरु साथीको नयाँ ठाँउ जाउ भन्ने राय रह्यो ।
कार्यसमितिमा रहेका अधिकांसलाई अर्को कार्यकालका लागि पदको लोभ थिएन । पाए जन्त नपाए अन्त भने जस्तै, एउटा झुण्ड थियो, दुइ बर्षको अवधीमा कयौ पटक त्यो झुण्ड नया सस्था स्थापना गर्ने रेसमा थियो । गुणराजले राजीनामा गर्दा “ठिक ग¥यौ हामीले एलएमा नै भनेको हो नी” भन्दै स्टाटस लेख्नेहरु बल्छी थाप्न सियाटल पुगे । आफु भनेको “पद” पाए पछि उनीहरुले गुणराजलाइ विर्सिए । सियाटलमा त्यो पद नपाएको भए ती झुण्ड नेजामा नै बस्थे ? गुणराजले जे गरे जो पहिले देखि तयारी थियो, उनलाई एकवारको जुनीमा जसरी पनि अध्यक्ष बन्नु थियो ।
अधिवेशन पछि, कार्यसमितिका सदस्यले धारावाहिक लेख्न थालेका छन्, हुन त तीनले पहिले पनि लेखेकै हुन, नेजा “कब्जा” गर्न सियाटल अधिवेशन लगिएको हो ।
हामीले “कब्जा” गर्न लगेको अघिवेसनमा तपाईहरुले उधारोमा मनोनयन दर्ता गर्दै निर्वाचित भएको प्रमाण पत्र पाउनुलाई के भन्नु हुन्छ ? त्यो गल्तीअरुले गरेको भए ? अन्य व्यक्ति भएको भए निर्वाचन समितिले त्यो सुविधा दिने थियो ?
विहानले दिन बताउछ, तपाइको उपाध्यक्षले उधारो मनोनयन दर्ता गर्ने सुविधा नेजा विधानको कुन धारा टेकेर पाए ? अधिवेशन शुरु हुनु अगावै आफु खुसी बसेको होटलको बील नेजाले किन तिर्नु पर्ने ?
तपाईले एलएको कथित हुलहुज्यत र अपायक सियाटलको प्रश्न उल्जाउनु अगाडी यदि नैतिकता पछाडीको खल्तीमा छैन भने आफ्नो उपाध्यक्षलाइ सोध्नु होला ।
म दावी साथ भन्छु, नेजाको इतिहासमा अधिवेशन पछि त्यसको प्रक्रियामा विवाद नभएको यही पहिलो हो । नेजाको हरेक अधिवेशन पछि एउटा समुह या त बाहिर या त “डिल” मा रहदै आएको छ । अर्को पाटो सदस्यता सम्वन्धी पुस्त्यौली विवाद हामीले नै सल्टाएका हौ । किनकी हामीलाई पदको स्वार्थ र लोभ थिएन । यो पटकको सदस्यता वितरण प्रक्रियामा औला उठाउने कोही हिम्मतवाल हुनुहुन्छ ? अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सँग आर्थिक पाटोमा सिघौरी खेल्न नपरेको भए, नेतृत्व भ्रष्ट चरित्रको नभएको भए अझ धेरै गर्न सकिने थियो ।
सम्मानमा रुमाल पनि लाने की ?
धेरै भएको छैन, अस्ति भरखरको “गौरी जोशि उमेदवार नहुने हो भने गैरआवासीय नेपाली संघ अमेरिका खारेज गरिदिए पनि हुन्छ ।” भन्दै लेख्नेहरु आज त्यही एनआरएनको सम्मान थाप्न जादैछन । मेरो अनुरोध छ, साथमा एउटा रुमाल पनि लैजानु होला, किनकी लाज लाग्यो भने अनुहार छोप्नु पर्छ । आफैले अस्थित्व विहिन नालायक भनेको सस्थाबाट स्वागत जो पाउदै हुनुहुन्छ ।
शनिवार, २०७५ भाद्र ०१ गते ०३:३९ / Saturday, Aug 18, 2018 3:39 am